नायक पल शाहको हातमा ह’ त्कडी लागेपछि थामिएन पुजाको आशुँ, तनुह जादै पूजा-हेर्नुहोस् ( भिडियो सहित) – Ap Nepal
नायक पल शाहको हातमा ह’ त्कडी लागेपछि थामिएन पुजाको आशुँ, तनुह जादै पूजा-हेर्नुहोस् ( भिडियो सहित)
March 2, 2022 310
काठमाडौँ – नायक पल शाह यतिबेला तनहुँको हिरासतमा अनुसन्धानका लागि छन् । शाहलाई ७ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँलाई अनुमति दिएको छ ।
आइतबार जिल्ला अदालत तनहुँले उनलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न ७ दिनको म्याद दिएको हो । आइतवार आत्मसमर्पण गरेपछि प्रहरीले उनलाई म्याद थपका लागि अदालत लगेको थियो । पल शाह र पुजा शर्मा अभिनित चलचित्र म यस्तो गित गाँउछु २ हलमा लागिरहेको छ । यहि बिषयमा पुजा शर्माले अब मुख खोल्ने बेला आएको बताएकी छिन् ।
एक च्यानलमा विषेश कुराकानिमा उनले पल त्यस्तो मान्छे नभएको र त्यो स’ड्यन्त्र भएको फेरि पनि बताएकी छिन् । भक्तपुरको क्यु एफ एक्स सिनेमा पुगेकि शर्माले पलको हातमा ह’त्कडी देख्दा मन थाम्नै गारो भएको समेत बताएकी छिन् । उनले अब फ’साएको विषयमा बोल्ने समेत बताएकी छिन् ।
शाहले प्रहरीसामु आ’त्म’स’मर्प’ण गरेको दिनमै उनले लेखेकी थिइन्- सम्मान छ हाम्रो रियल हिरो लाई!!! सत्यको जित अवश्य हुनेछ॥ अभिनेत्री पूजा शर्माले पूर्णविक्रम शाह अर्थात् पल शाहलाई सुनीयोजित तरिकाले फसाइएको बताएकी छिन्।
‘म यस्तो गित गाउँछु २’की निर्माता शर्माले फिल्म प्रर्दशनीकै मुखमा यस्तो ल’फडा निकालेको भन्दै सत्यको जित हुने बताइन्। संक्षिप्त कुराकानी गर्दै शर्माले भनिन्,‘फिल्म रिलिज हुनेबेला यसरी ल’फ’डा निकाल्नु भनेको हामीलाई असफल बनाउनु हो, तर दर्शकले निक्कै माया गर्नुभएको छ। हाम्रा आँशु हर्षमा परिणत भएका छन्।’
Prevपल शाहलाई ५ दिन लुकाएर प्रहरी कार्यालय पुर्याउने युवक यी रहेछन्…रूदै यसो भन्छन् (भिडियो सहित)
Nextनायक पल शाह प्रकरणमा पूर्व मिस नेपाल श्रृङ्खलाले यसो भनिन्
“चट्ट कपाल कोरेर” नयाँ गीत सार्वजनिक – हेरेर कम्मेन्ट गर्नुहोस् र पाउनुहोस् आकर्षक पुरस्का,र ! (भि,डियो सहित)